Ny sehatry ny fizahantany dia tokony ambaran'ny Governemanta Nepaley misokatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nepal » Ny sehatry ny fizahantany dia tokony ambaran'ny Governemanta Nepaley misokatra
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Serivisy fampandrenesana tariby • WTN
Bola: Taratasy fizahan-tany
Mivory ireo mpandraharaha fizahan-tany any Nepal mba hanamorana ny hetsika ataon'ny governemanta:
Nakatona i Nepal noho ny indostria ahazoam-bola be indrindra noho ny COVID-19
Ny fivorian'ny mpitantana fizahan-tany malaza, nokarakarain'ny Tale jeneralin'ny Birao fizahan-tany any Nepal, Deepak Raj Joshi dia tapa-kevitra ny hangataka amin'ny governemanta mba hanesorana ireo fepetra takina amin'ny quarantine ho an'ireo mpandeha vita vaksiny mba hampirisihana ny fizahantany any Nepal.
Nasongadiny fa vita vaksiny ny mpiasan'ny fizahan-tany ankehitriny, izany dia ny hevitry ny vondrona fa ny sehatry ny fizahan-tany dia tokony hambaran'ny Governemanta Nepal.
Ho fanampin'izany, ny vondrona dia manery ny famerenana visa rehefa tonga sy fampiroboroboana ny fitsapana PCR ao amin'ny seranam-piaramanidina.e
Raha ny faritra Nepal dia vao haingana ovoasazy noho ny fetra sasany, toy ny efitrano sinema sy trano fisakafoanana manana fahafaha-manana 50%, saingy tsy nisy fanavaozana ny fameperana ny dia nataon'i Nepal tao anatin'ny enim-bolana.
Ny sekreteran'ny PATA Suman Pandey dia niombom-pihetseham-po fa amin'ny visa tonga dia tokony havoaka ireo mpandeha vita vaksiny ary esorina ny fangatahana quarantine. Ny governemanta vao niforona dia mbola tsy nameno banga maro tamin'ny kabinetra ary voarohirohy amin'ny raharaha politika miaraka amin'ireo antoko politika mpifaninana ka andrasana raha toa ka afaka mandray andraikitra ny governemanta mba hampirisihana ity sehatra lehibe amin'ny toekarenan'i Nepal ity.
Deepak Raj Joshi ihany koa no solontenan'ny Nepal ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, ary nomena loka hanatevin-daharana ny WTN fizahan-tany Maherifo momba ny fizahantany.